सांसदहरुले सोधे– काँडाघारीमा निशान खड्काका अपहरणकारीको इन्काउण्टर किन गरियो ? – Everest Dainik – News from Nepal
सांसदहरुले सोधे– काँडाघारीमा निशान खड्काका अपहरणकारीको इन्काउण्टर किन गरियो ?
काठमाडौं, व्यवस्थापिका सदनमा काँडाघारीमा गत असारमा भएको इन्काउण्टरबारे प्रश्न उठेको छ । गृहमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्नै सांसद देवेन्द्र राज कँडेलले के कसरी हत्या भएको हो ? किन इन्काण्टर गर्नुपर्यो भन्ने विषयमा प्रश्न गरेका थिए । उनले के कति दूरीमा अपहरणकारी थिए र हत्या नै गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो भनेर पूरक प्रश्न समेत गरेका थिए ।
सोही विषयमा सांसद बालकृष्ण खाँणले इन्काउण्टरको आदेश कसले दिन्छ भन्ने प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा गृहमन्त्रीले तत्कालको अवस्था हेरेर प्रहरीले आत्मरक्षाका लागि गोली चलाउन आदेश नचाहिने बताए ।
यस्तो थियो गृहमन्त्रीको जवाफ
काँडाघारीमा ११ वर्षीय बालक निशान खडकाको पाशविक हत्यामा उठेको प्रश्न गम्भीर छ । असारमा घटना घटेको हो । यो विषयमा सरकारका तर्फबाट तत्काल स्पष्टीकरण दिइसकेका छौं । सदनमा उठेको विषयमा पनि गृह मन्त्रालयले लिखितरुपमा संसद सचिवालयमा लिखित जवाफ पठाइसकेको छ ।
जिल्ला सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची नौ ज्यामिरे घर भई कामनपा ३२ मा बस्ने चमेली खडकाको छोरा निशान खडका स्कूलबाट पसलमा आई अन्दाजी ६ बजे खेल्न बाहिर गएकोमा ८ बजेसम्म पनि खोजतलास गर्दा अन्दाजी राती नौ बजे चमेल खडकाले प्रइोग गर्ने मोबाईलमा फोन गरी तपाईको छोरा अपहरण गरी कब्जामा राखेका छौं, छोरा सकुसल चाहिन्छ भने ४० लाख लिएर आउनुहोला, प्रहरीमा खबर गरे राम्रो हुनेछैन भनी फोन आएको ।
रानीपोखरीमा सूचना प्राप्त भएपछि सोही सूचनाको आधारमा खोजी गर्दै जाँदा विशाल र अजय तामाङले अपहरण गरेको पत्ता लागेको र सोही राती निशानको हत्या गरी लास लुकाएको पाइएको । हत्यारा जंगलमा छ भनी सुराक पाएपछि खोजी गर्दै जाँदा प्रहरीमाथि गोली प्रहार हुँदा प्रहरीको काउण्टर फायरमा दुबैको हत्या भएको कुरा यसअघि नै प्रेस विज्ञप्तीमाफर्त स्पष्ट गरिसकेका थियौं ।
यो विषयलाई स्पष्ट गरिसकेको छु । कति दूरीमा कुन पिस्तोलले अपहरणकारीलाई प्रहार गरियो भन्ने कुरा छ, स्पष्टरुपमा जंगलमा इन्काण्टर भएको भन्ने रिपोर्ट प्राप्त भएको थियो । कति दूरीमा थियो भन्ने जानकारी छैन । तर लक्ष्यको सीमाभित्रबाट नै प्रहार भएको बुझ्नु जरुरी छ । त्यो घरेलु पेस्तोल थियो । त्यो सार्वजनिक पनि गरिसकेको छ ।
प्रेमीबाट नछुट्टिन सानैमा गर्भ